I-Cationic Surfactant, i-Amine yaseprayimari, i-Amine yesiSekondari-iKerui Chemicals
Wamkelekile kwiwebhusayithi yethu
Shandong Kerui Chemicals Co., ltd. umenzi ophambili kunye nokuthumela ngaphandle i-amine enamafutha, i-cationic surfactant kunye ne-nonionic surfactant e-China.
Sinowona mveliso mkhulu we-cationic surfactant ukusuka kwi-C8 ukuya kwi-C22, kubandakanya iimveliso ezixubeneyo zekhabhoni. Kananjalo sinokwenza i-OEM njengesicelo sabathengi. Siye phambili yolawulo lomgangatho elebhu kunye nophando elebhu ukuqinisekisa umgangatho imveliso yethu kunye neemveliso ezintsha. Sinentsebenziswano elungileyo nabo bonke abathengisi bezinto zethu ukuqinisekisa ixesha lethu lokukhokela ngokukhawuleza.
Sinabathengi abaninzi eRashiya, eIndiya, eTurkey, eUSA, eOstreliya, eVietnam, eIndonesia, eThailand nakwamanye amazwe amaninzi.
Eyona nto iphambili kwimveliso yethu yile ilandelayo:
Amine yamanqatha kunye neyasesekondari:
I-n-octyl amine, i-octadecyl amine, i-dihydrogenate endew amine 2000MT
Amine ephezulu yamanqatha:
I-Dimethyl lauryl amine, i-dimethyl myristyl amine, i-dimethyl hexadecyl amine, i-didecyl methyl amine, njalo njalo. 5000MT
I-hexadecyl trimethyl ammonium chloride, didecyl dimethyl ammonium chloride, di (octyl-decyl) dimethyl ammonium chloride, dodecyl trimethyl ammonium chloride, benzalkonium chloride, njalo njalo. I-10000MT
Lauryl-myristyl dimethylamine oxide, lauryl-myristyl dimethyl betaine, njalo njalo. 2000MT
Umgangatho ozinzileyo, amaxabiso okhuphiswano kunye neenkonzo zokumamela zijolise kuthi kuyo yonke imisebenzi yethu kwaye banokuqinisekisa ukuba sikunikezela ngcono. Sinqwenela ukuba simisele ukusebenzisana okuhle kunye nexesha elide kunye nenkampani yakho ebekekileyo ukusukela ngoku.
Amagama aphambili: icationic esebenzayo, Amine yamabanga aphantsi, Ii-Amines zasesekondari, Amine aphakamileyo, Amine oksayidi, UAmine Ether, IPolyamine, Umsebenzi weAmine kunye neAmide